I-china single stage end suction centrifugal type NFPA FM fire pump pump ifektri abakhiqizi | UThongke
Inombolo No.: XBC-ES
Amaphampu we-end suction centrifugal athola igama lawo endleleni amanzi ayithathayo ukungena empompa. Ngokuvamile amanzi angena ohlangothini olulodwa lwempepho, nasemapompo okumunca ukuphela okuvundlile, lokhu kubonakala kungena “ekugcineni” kwepompo. Ngokungafani nohlobo lwe-Split casing ipayipi lokudonsa kanye nenjini noma injini konke kuyafana, kuqeda ukukhathazeka ngokujikeleza kwepompo noma ukuma egumbini lokulungisa. Njengoba amanzi engena ohlangothini olulodwa lwempepho, ulahlekelwa amandla okuba namabheringi ezinhlangothini zombili zempepho. Ukuxhasa ukwesekwa kuzoba kusuka emotweni uqobo, noma kusuka kufreyimu yamandla empompo. Lokhu kuvimbela ukusetshenziswa kwalolu hlobo lwepompo kuzicelo ezinkulu zokugeleza kwamanzi.
Ongashadile isigaba Impompo Aizinzuzo:
● Kuhlanganiswe ngokuqondile, ubufakazi bokudlidliza nomsindo ophansi.
● Ububanzi obufanayo bokungena nokuphuma.
● Ukuthwala kwe-C & U, okuwumkhiqizo odume kakhulu e-China.
● Ukujikeleza kokugeleza kokugeleza kuqinisekisa ukusebenza kwemishini isikhathi eside.
● Kudingeka isisekelo esincane esizonga ukonga ukutshalwa kwezimali ngo-40-60%.
● Uphawu oluhle kakhulu olungekho ukuvuza
Isakhiwo esihlanganisiwe, iningi lesicelo sokwakhiwa kwanamuhla.
♦ Pump bezinhlamvu: bezinhlamvu Kuvunguza nge ipayipi uxhumano yakhelwe futhi akhiwe ophakeme kakhulu imodeli draulic kulezi zinsuku, nge itheku futhi esidayisa ububanzi efanayo. Ama-Flanges ahambisana ne-GB4216.5, futhi afakwe i-Rp1 / 4 noma i-Rp 3/8 yokuhlola ingcindezi.
♦ Impeller: impeller evaliwe, akunamkhawulo ekuqondisweni kokujikeleza ngaphansi kwezinga lokushisa kwamanzi ngaphansi kuka-80 ° C no-120 ° C.
Design Idizayini ekhethekile yendandatho yesandla eshukumisayo iqinisekisa ukusebenza kahle nokuthembeka.
● Qedela amakhono okwenziwa ngaphakathi endlini
● Amandla wokuhlola asebenza ngomshini anempahla yamakhasimende enazo zonke izindinganiso zeNFPA
● Amamodeli avundlile wamandla ukuya ku-2,500 gpm
● Izinhlobo eziqondile zamandla afinyelela ku-5,000 gpm
● Amamodeli we-inthanethi wokukwazi ukufinyelela ku-1,500 gpm
● Qeda amamodeli wokumunca amandla afike ku-1,500 gpm
● AmaDrayivu: injini kagesi noma injini kadizili
● Amayunithi ayisisekelo nezinhlelo ezihlanganisiwe.
Amaphampu omlilo we-Electric Motor Drive kanye ne-Diesel Engine Drive anganikezwa nganoma iyiphi inhlanganisela yamaphampu, amadrayivu, izilawuli kanye nezinsiza zezinhlelo zokusebenza zomlilo ezisohlwini nezimukelwe. Amayunithi ahlanganisiwe nezinhlelo eziphansi zokufaka impompo yomlilo bese unikela ngazo.
I-Electric Motor Drive Single isigaba umlilo futha
Idizili Yenjini Yedizili Isigaba esisodwa impompo yomlilo
Langaphambilini Uchungechunge lwe-TWP Ucingo olubili luphatha ipayipi lokususa amanzi
Olandelayo: Split casing double suction type NFPA UL FM pump pump
Imininingwane ye-TKFLO Vertical Turbine Fire Pump
Uhlobo lwePump Qeda ukudonsa amaphampu we-centrifugal ngokulingana okufanelekile ukuhlinzeka ngamanzi ohlelweni lokuvikela umlilo ezakhiweni, ezitshalweni nasemagcekeni.
Amandla Kuze kufike ku-2500GPM (567m3 / hr)
Inhloko Kuze kube ngama-340feet (104meters)
Ingcindezi Kuze kube ngu-147 Psi (10 kg / cm2, 1014 KPa)
Amandla Endlu Kuze kufike ku-350HP (260KW)
Abashayeli Ama-motors kagesi avundlile nezinjini zikadizili
Uhlobo luketshezi Amanzi
Ithempelesha I-Ambient ngaphakathi kwemikhawulo yokusebenza kwemishini egculisayo.
Izinto zokwakha Insimbi yensimbi, iBronze ifakiwe
ububanzi bokuphakelwa: Iphaneli yokushayela umlilo yenjini + iphaneli yokulawula + ipompo yeJockey Iphampu yokushayela kagesi kagesi + iphaneli yokulawula + ipompo yeJockey
Esinye isicelo saleyunithi sicela sixoxe nonjiniyela be-TKFLO.